Maxay tahay sababta uu Ra’isalwasaare ku xigeenka Turkiga u imaanayo Magaalada Muqdisho? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay sababta uu Ra’isalwasaare ku xigeenka Turkiga u imaanayo Magaalada Muqdisho?
Maxay tahay sababta uu Ra’isalwasaare ku xigeenka Turkiga u imaanayo Magaalada Muqdisho?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Ra’isalwasaare ku xigeenka Dalka Turkiga Hakan Çavuşoğlu ayaa la filayaa in maalinta Arbacada ah ee soo socota uu booqasho ku yimaado Magaalada Muqdisho.
Hakan Çavuşoğlu,waxaa uu booqashadiisa Afrika ka soo billaabayaa Dalka Suudaan halkaas oo uu kula kulmayo dhiggiisa Suudaan, Bakri Xasan Saalax.
Labada Masaajid oo kala ah Al Xanafi iyo Al shaafici,kuwaas oo ay dhistay Dowladda Cusmaaniyiinta,waxaana hadda dayactir ku sameysay Hay’adda TIKA ee Turkiga.
Sidoo kale waxaa uu booqan doonaa Jasiiradda Suakin oo dhawaan Suudaan ku wareejisay Turkigamtaas oo 261 Maayl uun I jirta Magaalada Jiddah oo ah tan labaad ee ugu weyn Sucuudiga,halkaas oo dowladdii Cusmaaniyiinta ay ka difaaci jirtay Gobolka Xijaaz ee galbeedka Sucuudiga dhaca.
Ra’isalwasaare ku xigeenka Turkiga ayaa Dalka Suudaan xarigga ka jari doona dhismayaasha labo Masaajid,Kastamada Canshuuraha.
Warbaahinta Turkiga ayaa sidoo kale faafisay in Hakan Jaush Ogolo uu inta uu joogo Soomaaliya uu la kulmi doono Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madax kale.
Ujeedada uu Soomaaliya u imaan doono Ra’iisul Wasaare ku xigeenbka Turkiga ayaa lagu sheegay in uu kormeer ku sameyn doona Saldhiga Turkiga uu ka dhistay Muqdisho oo Ciidamo ka tirsan dowladda lagu tababaro iyo sidoo kale kormeer kale uu ku tegi doono dhul Maamulka gobolka Banaadir uu ku wareejiyay kaas oo laga dhisayo Xarun lagu tababaro Ciidamada kaas oo ku yaalla deegaanka Jaziira.